LIFE STYLE Archives - SANTHITSA
လူငယျလူရှယျတှေ မဖွဈမနေ လုပျသငျ့သော အရာမြား…
လူငယျလူရှယျတှေ မဖွဈမနေ လုပျသငျ့သော အရာမြား… 1. ကိုယျ့ဘဝကိုယျ သိပါ။ 2. ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျတနျဖိုးထားပါ။ 3. ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကို ဘယျသူတှနေဲ့မှ မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့။ 4. ငှကေို စုပါ။ 5. အခြိနျကို တနျးဖိုးထားပါ။ 6. လကျရှိ အလုပျကို သစ်စာရှိပါ။ 7. ဗဟုသုတ မြားစှာကို လိုကျစားပါ။ 8. စိတျဓာတျ ကွံခိုငျမှု ရှိပါ။ 9. ပေးကမျးစှနျ့ကွဲနိုငျသူ တယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ။ 10. အရာရာတိုငျးကို လေးလေးနကျနကျ တှေးချေါပါ။ 11. မိတျဆှကေောငျးတှကေို ပေါငျးသငျး ဆကျဆံပါ။ 12. စညျးကမျး ရှိပါ။ 13. သပျသပျရပျရပျ ဝတျဆငျပါ။ …
“ငါက အဆဈထညျ့ပေးတာ မဟုတျပါဘူး… သူ့မတ်ေတာတရားက အလေးသာသာ သှားတာပါ…”
“ငါက အဆဈထညျ့ပေးတာ မဟုတျပါဘူး… သူ့မတ်ေတာတရားက အလေးသာသာ သှားတာပါ…” တဈခါက အဖှားအိုတဈဦးဟာ ဈေးထဲမှာ လိမ်မျောသီးဆိုငျလေးတဈဆိုငျ ဖှငျ့ထားပါတယျ. လူတဈယောကျကလညျး အမွဲလို အဖှားအိုဆိုငျကနေ လိမ်မျောသီးဝယျလရှေိ့သတဲ့… သူ့စိတျကွိုကျ လိမ်မျောသီးတှေ ရှေးပွီးတာနဲ့ ကီလိုခြိနျ ကသြငျ့ငှေ ရှငျးပွီးရငျ သူအမွဲလုပျနကြေ အပွုအမူတဈခုရှိသတဲ့… အဲဒါကတော့ လိမ်မျောသီးအားလုံး အိတျထဲထညျ့ပွီးတိုငျး လိမ်မျောသီးတဈလုံးကို အိတျထဲက ပွနျထုတျ အခှံခှာပွီး လိမ်မျောသီးတဈစိတျကို စားပါတယျ…. ပွီးရငျ “ဒီလိမ်မျောသီးက အရမျးခဉျြတာပဲ” လို့ ပွောပွီး ကနျြတဲ့တဈလုံးလုံးကို အဖှားအိုကို ပေးပါတယျ. အဖှားအိုကလညျး တဈစိတျစီ စားကွညျ့ရငျး “ဘာဖွဈလို့လဲ မခဉျြပါဘူး. ခြိုပါတယျ လူကလေးရဲ့” လို့ အမွဲပွနျပွောပွီး အဖှားအိုက …
အသားညိုတဲ့သူတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့အချက်(၄)ချက်
အသားညိုတဲ့သူတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့အချက်(၄)ချက် အသားဖြူတဲ့ သူနဲ့ အသားညိုတဲ့သူ ဘယ်သူက ပိုလှ သလဲ ဆိုတာ အမြဲ စဉ်းစား စရာဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အသားဖြူချင်လို့ အသားဖြူဆေးထိုးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊ အသားညိုညိုလေး မှကြိုက်လို့ နေပူစာလှုံတဲ့ သူလးတွေ လည်း ရှိတာ ပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော အသားညို တာလေးက ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတယ် ဆိုတာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပြ နေ ပါတယ် ။ ၁- စိုပြည်တဲ့ အသားအရေအမျိုးအစား အသားညိုတဲ့ သူလေးတွေက အသားခြောက်တာ မျိုးမ ရှိဘဲ၊ စိုပြည်တဲ့ အသားအရေ အမျိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင် ထားတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …
သင့်ကို ရက်စက်စွာလမ်းခွဲသွားတဲ့လူကို ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ နောင်တရအောင်လုပ်လိုက်ပါ
သင့်ကို ရက်စက်စွာလမ်းခွဲသွားတဲ့လူကို ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ နောင်တရအောင်လုပ်လိုက်ပါ ချစ်သူ ရည်းစားထားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ယောက်တည်း ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တန်ဖိုးထားမှု တူညီပြီး အဆင်ပြေမှသာ ရေရှည် လက်တွဲ နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင့်ဘက်က တန်ဖိုးထားပေမယ့် သူ့ဘက်ကတော့ သင့်အပေါ် တန်ဖိုးမထား ပစ်ချသွားသူတွေနဲ့ ကြုံနိုင် ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာတဲ့အခါ အချိန် အကြာကြီး အသည်းကွဲ မနေသင့် ပါဘူး။ သင်နဲ့ မထိုက်တန် လို့ သူက သင့်အနားက ထွက်သွား ရတာပါ။ ဒါကြောင့် သင်က အများကြီး အဖိုးတန်ကြောင်းကို ပြသပြီး သူနောင်တရ သွားအောင် သင့်ကိုယ်သင် …
အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ။
အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်း မ ဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အရာတချို့ကို ပြောပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁ – လက်မထပ်ပါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်က အရမ်းငယ်လွန်းပါတယ်။ ဘဝတက်လမ်းအတွက်လည်း ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရူးမိုက်ပြီးလက်ထပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအရွယ်က မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်မို့ လက်မထပ်သင့်ပါဘူး။ ၂ -ပုံအောပြီးမချစ်ပါနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပုံအောချစ်ထားပြီးမှ ကွဲသွားခဲ့ရင် ကိုယ်ပဲအလူးအလဲခံစားရမှာပါ။ ဒီအရွယ်မှာ မတည်မြဲနိုင်သေးတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဆို အရမ်း Serious မဖြစ်ပါနဲ့။ကိုယ့်အတွက် ရှေ့ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ တွေ့ရမယ့်လူတွေက အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ …
ရှားပါးတဲ့ မိန်းမအမျိုးအစား ( ကိုယ်ကဒီလိုမိန်းကလေးလား၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးများလား)
ရှားပါးတဲ့ မိန်းမအမျိုးအစား ( ကိုယ်ကဒီလိုမိန်းကလေးလား၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးများလား) လောကမှာ မိန်းမ မရှားဘူးလို့ အော်တတ်တဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေ ရှေ့ထွက်ခဲ့စမ်းပါ တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်လို့ မိန်းမ ပေါတယ်ဆိုပြီး မင်းတို့ လိုချင်တိုင်း ရခဲ့ကြလို့လား? မင်းတို့ လက်ထဲမှာ ကား ဆိုင်ကယ် ပိုက်ဆံရှိနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မိန်းမ ပေါရင် ပေါနေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မိန်းမ လိုချင်တာလား ဇနီးကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလား ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ် မိန်းမ မရှားဘူးဆိုတာ ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့် မင်းအပေါ် သစ္စာတရားနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးတော့ ရှားတယ် မင်းကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးတော့ ရှားတယ် …